Ama-Nootropics kanye nama-Smart Drug formulations ane-Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
Izidakamizwa ezi-Smart nezithasiselo ze-nootropic zidliwa "njengezithuthukisi eziqondayo" ukuze zikhulise ukusebenza kwengqondo, umthamo wobuchopho, ukugxilisa ingqondo, inkumbulo nobuqambi, ukuqinisa ugqozi namandla engqondo kanye nokusekela impilo yobuchopho. Ukuphakamisa ukuthuthwa kwamakhemikhali we-bioactive anjenge-nootropics, izidakamizwa ezihlakaniphile nezinto ezinika amandla kulo lonke igazi-brain-barriers (BBB), ama-molecule kufanele abe kwifomu elithuthukisiwe le-nano. Ama-nano-liposomes alungiselelwe ngokwe-ultrasonically, ama-micoples, ama-nanoparticles aqinile we-Ultrasonic, ama-nanano ahlelekile we-nano kanye ne-nano-emulsions ukukhulisa i-bioavailability yama-molecule we-bioactive, amavithamini nama-phytochemicals.
AmaNootropics noma izidakamizwa eziwusizo zingama-molecule obuchopho bomzimba nomzimba – okubizwa ngokuthi abathuthukisi bokuqonda – , engahlukaniswa ngezigaba ezilandelayo ama-racetams, izishukumisi, ama-adaptogens, ama-cholinergics, ama-serotonergics, ama-dopaminergics, izidakamizwa ezi-metabolic function nezigaba eziningi.
Unentshisekelo kulezo zigaba ezihlukene ze-nootropics? Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-nootropics kanye nokuhlukaniswa kwabo!
Yini amaLiposomes kanye neLipid-based Nanocarriers?
Ama-liposomes kanye ne-lipid-based nano carriers ezifana ne-nano-emulsions, i-nano-suspensions, i-lipid nanoparticles (SLNs) eqinile ne-nanostructured lipid carriers (NLCs) zaziwa njengezinhlelo zokuthwala izidakamizwa ezinamandla, ezilethela ama-molecule we-bioactive nezakhi ezakhiweni zeseli eziqondisiwe kanye Umphumela walokho ngamanani aphakeme we-bioavailability kanye namazinga wokufaka.
AmaLiposomes angahlukaniswa njengefomu elithile le-nanostructured lipid nanocarriers. AmaLiposomes ama-vesicles ayindilinga anomgogodla omanzi obiyelwe umjikelezo wamabhange owodwa noma amaningi we-lipid. Njengoba ama-liposomes anikeza amandla okubamba ama-molecule we-lipophilic ne-hydrophilic, athola ukwamukelwa okukhulu njengohlelo olunamandla lokulethwa kwezidakamizwa. Esakhiweni sayo esiziqoqele, esizivalile, i-liposome ingakwazi ukufaka imakhompiyutha amaningi (okusho izakhi zomzimba noma ama-molecule okwelapha) ngasikhathi sinye. I-phospholipidic bilayer yayo ivikela ama-molecule we-bioactive afakiwe ukungahambisani ne-hydrolysis kanye nokuwohloka kwe-oxidative. Njengoba ukwakheka kwengqimba ye-liposome kubonisa ukufana okubalulekile kweseli yezilwane ezincelisayo, ama-liposomes ayakwazi ukudlulisa izingxube ze-bioactive zibe amaseli neziza ezingaphansi. Izinzuzo ezaziwayo zezinhlelo zokulethwa kwe-liposomal zifaka phakathi ukuvikela kwazo ekuwohlokeni kwe-enzymatic, ubuthi bawo obuphansi, ukuphakama okuningana kwezinto eziphakeme, i-biodegradability kanye ne-non-immunogenicity.
Ukwakheka okuhlelekile kwama-liposomes, ama-niosomes, ama-nanoemulsions, ama-nanoparticles aqinile-we-lipid, abathwali be-lipid be-nanostructured
umfanekiso: Poonia et al. 2016
Ezinye Izithwali zeLipidic Nano-Carriers
I-Lipidic nano-carriers noma i-lipid-based nano-carriers ichazwa njengezinhlelo zokulethwa kwezidakamizwa / zama-molecule, ezisebenzisa ukwakheka kwe-lipid ukufaka ama-molecule we-biiovail ukuze kutholakale ukuphuculwa kwe-bioavailability, amazinga aphezulu okufaka, ukuqina okuhlala isikhathi eside nokuvikelwa ngokumelene izinto zokonakaliswa kwangaphandle (isb. i-oxidation, hydrolysis). Izithwali ze-lipid ze-Nanostructured zifaka i-lipid nanoparticles eqinile (i-SLN), i-nanostipured lipid carriers (NLC), nanoliposomes, micelles, nanoemulsions, nanosuspensions kanye ne-lipid nanotubes. Ukwakheka kwamakhemikhali athize kanye nezimpawu zawo ezihambisanayo ze-physicochemical kunika ifomu ngalinye le-nano-carriers izinzuzo ezihlukile, ezizenza zifanele amafomu athile okuphatha (isib. Ngomlomo, ngaphakathi, ngaphakathi, phakathi kwe-transdermal njll), inhlanganisela yamamolekyuli, ukulayisha umthamo noma ukwakheka kwesikhathi.
Ama-solidi e-lipid nanoparticles (SLN) nama-lipid carriers (NLC) achazwa njengezinhlayiya eziqinile eziqukethe i-matrix ye-lipid esigabeni esinamanzi esizinzile ngabasizi bokusebenza.
I-Liposomal namanye ama-nano-encapsated (isb. Ama-SLNs, ama-NLC) anikela nge-bioavailability ephakeme, okusho ukuthi iphesenti eliphakeme kakhulu lezinto eziphilayo (isib. I-vithamini, i-antioxidant, i-flavonoid njll) iyangenwa futhi isungulwe amaseli womzimba. Ingxenyenamba encane kakhulu kuphela edotiwe ngoba ayigwenywa kepha idlulwa ngumzimba. Lokhu kwenza ukwakheka kwe-nano-liposomal kube namandla amakhulu, kusebenze futhi kuthembeke ngoba cishe wonke ama-mocule we-bioactive ahanjiswa kumaseli wokuya.
Ukwakheka kwe-Ultrasonic kweMolekyuli Eyishukumisa nge-Bioavailability ephezulu kakhulu
I-Ultrasonic nano-emulsation ne-nano-encapsulation yenza ama-molecule we-nootropic kanye ne-psychoactive amanzi-ancibilikayo futhi ngaleyo ndlela ancengeke kakhulu futhi abe yi-bioavava. Izinga lokumunca eliphakeme kanye nokukhula kwe-bioavailability kanye nokusebenza ngokweqile kwezinto eziphilayo kwenza into ephilayo ibe namandla amakhulu futhi kungakuvumela ukuwela umgoqo wegazi-ubuchopho.
Ukwenziwa kwe-Ultrasonic kwe-Nootropics
I-Solid-Lipid Nanoparticles (SLN)
Izithwali ze-Nanostructured Lipid Carriers (NLC)
I-inclusive Complex (isib. Cyclodextrin)
Kunezimpilo zobuchopho eziphindaphindwe kaningi namandla okulekelela ama-molecule, izakhi zomzimba nama-phytochemicals, angakhishwa futhi / noma ahlanganiswe kokungezelelwa okuthuthukisiwe kwe-nano, njengamanzi uketshezi, ama-tincture, amaphaphu, izifutho zamakhala, imikhiqizo yokudla eqinile njll.
Ama-nootropics aziwa kakhulu yizinto zesigaba se-racetam, njenge-piracetam, i-aniracetam, i-oxiracetam, i-pramiracetam ne-phenylpiracetam. Ama-Racetams amaningi angama-lipophilic (= amafutha-anyibilikayo). Kusetshenziswa ukwelashwa kwe-ultrasonic, i-fat-soluble racetam ifakwe ifomu elithuthukisiwe le-nano elifana ne-nano-emulsions, liposomes, solid-lipid nanoparticles (SLNs), kanye ne-nanostructured lipid carriers (NLCs). Lezi zinqubo ezithuthukisiwe ze-nano ziguqula i-repetant enamanzi, i-solar-soluble racetam ibe ngumkhiqizo oncibilikiswa ngamanzi. Njengoba ukugeleza kwegazi emzimbeni womuntu kungokwakhiwa kwamanzi okuncibilikisa okwenziwa ngamanzi okusebenzisa i-nano kunikeze amandla we-bioavailability aphezulu kakhulu.
Ultrasonically Nano-Thuthukisiwe Izidakamizwa ze-Smart
Ubuchwepheshe bokufakelwa kwe-ultrasonic nobuchwepheshe be-nano-formula bunika amandla ukulungiselela ukulungiswa kwezithasiselo ezinamandla kakhulu kanye nemithi yokwelapha. Ama-molecule we-bioactive azuza ekwakhekeni kwe-liposomal noma kolunye uhlelo lwenethiwekhi ethwala i-lipid afaka amavithamini, ama-antioxidants, ama-flavonoid, akhipha i-botanical, amaminerali, ama-amino acid kanye nama-peptides.
Amavithamini kanye nama-antioxidants, angahle akhishwe emthonjeni wemvelo noma ahlanganiswe, afaka amavithamini C, amavithamini B, i-glutathione, i-resveratrol, i-CoQ10 (ubiquinone), njll.
Ama-molecule we-herbal kanye ne-botanical anjenge-CBD, THC, CBG (cannabis), ikhekhe eliluhlaza okotshani (isib. EGCG), i-nicotine, ikhafeine, i-ashwagandha, i-Berberine, i-kratom njll.
Izikhunta / amakhowe akhishwa njenge-astragalus, i-mane's lion, umsila we-turkey, i-chaga, i-psilocybin (amakhowe omlingo), njll.
Ama-amino acid anjenge-creatine, glycine, 5-HTP (5-hydroxytryptophan), phenylalanine, L-theanine (i-aninoue analogue etholakala etiyeni), i-GABA (gamma-aminobutyric acid), taurine, N-acetylcysteine (NAC), L -tyrosine, njll.
Amaminerali afana ne-magnesium chelates (isb. Magnesium threonate, magnesium orotate) angakwazi ukufakwa ngembobo ephezulu njenge-nano-elementumates in liposomes.
Ama-nati, ama-peptides, namanye ama-molecule afana ne-alpha-GPC, i-melatonin, i-choline (choline bitartrate, i-choline chloride), (ubuhlanga) i-ketamine, i-omega-3 fatty acids (EPA, DHA), α-lipoic acid (ALA), selegiline ( I-L-deprenyl), i-centrophenoxine, i-oxytocin, i-methylene eluhlaza okwesibhakabhaka, njll.
Ukwakheka kwe-liposomal okwenziwe ngcono kwama-molecule we-bioactive nezakhi zomzimba kunika i-bioavailability ephakeme futhi kungavumela izinto eziqondisiwe ukuthi zeqe umgoqo wobuchopho begazi. Ukugoqeka kuvimbela ama-molecule we-bioactive ngokumelene ne-hydrolysis eyenziwe nge-acid esiswini nokuwohloka kwe-enzymatic kulo lonke lelo pheshana lesisu, ukuze kuthi inani elikhulu lezakhi lihanjiswe lingonakaliswa endaweni eqondiwe yamangqamuzana.
I-Excursus: Isizinda se-Ultrasonic se-Phyto-Chemicals
I-Sonication ubuchwepheshe obukhulu bokukhipha ama-molecule we-bioactive ezitshalweni, isikhunta namagciwane. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuyindlela engashisi, yomgomo wayo osebenzayo usekwe ku-acoustic cavitation. I-acoustic / i-ultrasonic cavitation yakha i-shear yemishini kanye neziphithiphithi, eziphelisa futhi ziphazamise izindonga zeseli nolwelwesi futhi zikhuthaza ukudluliselwa ngobuningi. Ngaleyo ndlela, i-sonication ikhipha izinto ezi-bioactive kusuka ezingaphakathi kweseli bese ziyidlulisela endaweni eyi-solvent (isib. Amanzi, i-ethanol, i-glycerine, i-oyela yemifino njll).
Funda kabanzi mayelana nokukhishwa kwe-ultrasonic kwama-molecule we-biioactive kusuka ku-botanicals!
Ama-Ultrasonicators aphezulu enza umsebenzi we-Nootropic
Izinhlelo ze-Hielscher Ultrasonics 'ziyimishini ethembekile esetshenziselwa ukwakhiwa kwezemithi nokwengeza amakhambi ukwakha ama-nootropics asezingeni eliphakeme nezidakamizwa ezihle, ezisukela kuma-nano-emulsions kuya kuma-liposomes, abathwali be-lipid be-nanostructured, i-nanoparticles eqinile, ne-inclusions complexes elayishwe ngamavithamini , ama-antioxidants, ama-flavonoid, ama-peptides, ama-polyphenols nezinye izinto ezihlanganisiwe futhi anikezela nge-bioavailability ephezulu kakhulu, ukuzinza okukhulu nokusebenza. Ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ayo, ama-Hielscher anikeza ama-ultrasonicators avela ku-compact hand-hand lab homogenizer ehlanganisiwe kanye ne-bench-top ultrasonicators to the yakazara ultrasonicators system for ukwenziwa kwama-high-volumes of nootropics and smart drug formuction. Izinqubo zokuqamba ze-Ultrasonic zingaqhutshwa njenge-batch noma njengenqubo eqhubekayo emugqeni kusetshenziswa i-ultrasonic flow-ngokusebenzisa reactionor. Uhla olubanzi lwe-sonotrodes (i-phenes) nemikhumbi ye-reactor iyatholakala ukuqinisekisa ukusethwa okulungile komkhiqizo wakho we-liposome. Ukuba namandla kwemishini yokusebenza kwe-Hielscher sika-Hielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 ngaphansi komsebenzi osindayo ezindaweni ezifunwayo futhi kuqinisekiswe umjikelezo wempilo ende we-ultrasonicators.
Ama-Nootropics nezidakamizwa ezi-Smart
Igama “i-nootropic” lisuselwa kumagama esiGreek asendulo όόός (nóos), amele “ingqondo” kanye ne-τροπή (tropḗ), enencazelo “ukuguquka ”. Ama-Nootropics, abizwa nangokuthi izidakamizwa ezi-smart, "izinto eziguqula ingqondo", okuwukuthi, izinto ezi-bioactive ezithinta ubuchopho ngokwandisa ukusebenza kwengqondo, ikakhulukazi ubuhlakani, imisebenzi ephezulu, inkumbulo, ubuqambi, ukuqaphela, kanye nogqozi. Zisetshenziswa njengezithuthukisi eziqondayo noma njengokuphamba kwengqondo. Ama-nootropics adumile afaka ama-racetams. Ifomu lokuqala elenziwe nge-racetam lasuselwa ku-GABA futhi laziwa ngokuthi yi-piracetam, elibhekwa njengelingelobuthi futhi liphenya isikhathi eside. I-Aniracetam, i-oxiracetam, i-pramiracetam ne-phenylpiracetam ziyefana ngesakhiwo se-piracetam, kepha zibonisa amandla aphezulu okuvusa amandla. Izinhlobo ezintsha ze-racetam ezinjenge-coluracetam, i-fasoracetam, i-nefiracetam, noma i-noopept azinakho ukufana kwesakhiwo ne-piracetam.
Amanye ama-nootropics angaba nemiphumela ye-psychedelic noma i-psycho-active / psychotropic, futhi futhi athinte izinqubo zengqondo, isb. Ukuqonda, ukwazi, ukuqonda, ukuphendula, imizwa nemizwelo.
Ama-Racetams ayaziwa njengohlobo lokuqala lwesidakamizwa esihlakaniphile nge-piracetam njengohlanga lokuqala olwenziwe ngohlobo oluthile okwaziwa ngokuthi yi-nootropic yokuqala eyake yaba khona. IPiracetam iyimolekyulu eqenjini le-racetams enegama lamakhemikhali i-2-oxo-1-pyrrolidine acetamide. Kususelwa ku-neurotransmitter GABA (gamma-aminobutyric acid). IPiracetam iyi-molekyule yezidakamizwa enomgogodla we-pyrrolidone, ovame ukubekelwa iziguli ezinezimpawu ze-Alzheimer's noma pre-dementia. Kodwa-ke, i-piracetam namanye ama-racetam asetshenziswa futhi ngabantu abadala abanempilo ukuze kuqiniswe ukudluliselwa kwamakhemikhali phakathi kwamaseli obuchopho. Ama-Racetams angakhuphula i-IQ ejwayelekile, imisebenzi yememori nokufunda, ukucaca kwengqondo nokukhuthaza. Amanye ama-molecule esigabeni se-racetam yi-pramiracetam, i-oxiracetam, kanye ne-aniracetam.
Njengoba ama-racetams ewela esigabeni sezinto ezingalawulwa e-USA noma kwamanye amazwe amaningi emhlabeni, ama-racetam angathengwa njengama-OTC (ngaphezulu-the-counter) supplements ngaphandle kadokotela. Ama-Racetams abhekwa njengemiphumela emibi engeyona enobuthi futhi ejwayelekile ibandakanya ukuqaqamba kwekhanda, okuwumphumela wokuphelelwa ngamandla kwezinhlanga ezinjenge-choline ebuchosheni. Ngakho-ke, abasebenzisi bavame ukuhlanganisa umthamo wabo we-racetam nesengezo se-choline (isb. I-choline bitartrate. Ama-racetams amaningi anemiphumela emibi ukukhanya kuphela, efana nokusetshenziswa kwe-caffeine ngokweqile.
Izinto ezivuselelayo ezifana ne-caffeine ne-nicotine ziyizidakamizwa ezihle ezisakazeka kakhulu emhlabeni wonke. I-Caffeine ne-nicotine zingama-psychostimulants asemthethweni, kanti ukusetshenziswa kwe-amphetamines okungekho emthethweni akukho emthethweni. Isigaba sezinto ezikhuthazayo sifaka cishe noma isiphi i-molecule ekhuthaza ukuvuka nokuqwashisa jikelele, sinciphise umuzwa wokukhathala nokudangala futhi sikhuphuke ngasikhathi sinye ukusebenza kobuchopho kanye ne-intelligence quotient (IQ). Umuthi olwa ne-narcolepsy Modafinil ungomunye wezidakamizwa ezivelele, ezisetshenziswa ngabantu abanempilo njenge- "off-label cognitive enhancer" ukuthuthukisa umsebenzi wokuqonda. Esinye isidakamizwa esisetshenziswe ngaphandle kwelebuli yi-methylphenidate, umuthi osetshenziselwa ukwelapha i-Attention Deficit Hyperacaction Disorder (ADHD) futhi osetshenziswa ngabantu abanempilo njenge-enhancer cognitive.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokukhishwa kwe-ultrasonic kwe i-caffeine futhi i-nicotine!
Izinto ze-Adaptogenic ziyizinhlanganisela ze-phyto-chemical, okusho ama-molecule asuselwa ezitshalweni, aphathwa ukuze kuqiniswe ukuphendula komzimba namasosha omzimba wakho ezimweni ezicindezelayo. Ama-Adaptogener angachazwa njengezakhi “zokugcizelela”, ezivusa umzimba ukuzivumelanisa nokugcina noma ukuphinda uthole i-homeostasis (ukulingana phakathi kwezinqubo ze-metabolic zomzimba). Indlela eyinhloko yesenzo se-adaptogenic ithinta i-hypothalamic-pituitary-adrenal (i-HPA axis) ephendula ukukhuthaza ukucindezelwa kwangaphandle. Cishe wonke ama-adaptogens awela esigabeni semithi engalawulwa, engathengwa njengokwengezekelwa ngaphezulu kwe-counter (OTC). Ama-adaptogen adume kakhulu futhi asetshenziswa kakhulu yi-ginseng, gingerol (ginger), ashwagandha, eleutherococcus senticosus (Sibinsan ginseng), i-Rhodiola rosea (i-Arctic izimpande), i-schisandra chinensis, kava kava, imbali yesifiso, iSt Johns Wort, ne-scutellaria baicalensis (isiChinese isikhumba).
Ingabe iCannabis yi-Adaptogen? I-Cannabis ithole ukunakwa okukhulu eminyakeni yokugcina, ikakhulukazi ngenxa yezingxube zayo zokulwa nokuvuvukala (cannabidiol (CBD)) ne-cannabigerol (CBG). Ngisho nama-cannabinoids ayizithako ezingezona ezinobuthi ezithathwe ezitshalweni futhi anemiphumela yokunciphisa ingcindezi emzimbeni, ama-cannabis nama-cannabinoids awahlukaniswa ngokusemthethweni njengezinto ze-adaptogenic. Kepha njengoba i-CBD, i-CBG nama-adaptogenics eqiniso ekhombisa ukufana ekusebenzeni nasemiphumeleni yawo, kuvame ukusetshenziswa ngokubambisana ukuze kwandiswe ukusebenza kahle kwe-cannabinoid kanye ne-adaptogen.
Ngenkathi ama-adaptogenthi eba nemiphumela ekhuthaza impilo nokunciphisa ingcindezi, akhombisa imiphumela emincane kuphela njengabathuthukisi bokuqonda, "ngese". Ukuthuthukiswa kokuqonda okuvela kuma-adaptogens ikakhulukazi kutholakala ngokulinganisa ukusabela kokuphendula kwengcindezi yomzimba, ukuqina nokuqina kwempilo, kunokuba kuqale ngokuqondile ukukhula kwamangqamuzana obuchopho amasha noma ukuxhumeka kwe-neural.
Qhafaza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokukhishwa kwe-adaptha yama-adaptha kusuka kuma-botanicals!
Izinto ze-Cholinergic zingxube zamakhemikhali alingisa isenzo se-acetylcholine kanye / noma i-butyrylcholine. Izidakamizwa ezi-based-choline ezisebenzisa i-Choline zidliwe ngemiphumela yazo kwimemori, ukunakwa, kanye nokulawulwa kwemizwa. I-Acetylcholine ingenye yama-neurotransmitters amakhulu ebuchosheni. Futhi kuyingxenye ebalulekile yokusebenza kahle kohlelo lwezinzwa olungemuva. I-Choline ingathathwa njenge-supplement, kepha futhi ikhona ekudleni, isb. Amaqanda amaqanda no-soya abacebile ikakhulukazi kwi-choline.
I-Sulbutiamine (etholakala kwezentengiselwano njenge-OTC (ngaphezulu kwekhawuntari) ngaphansi kwegama lomkhiqizo i-Arcalion) isuselwa ku-thiamine (uvithamini B1), onqamula emngceleni wegazi lobuchopho futhi okwaziyo ukukhulisa amazinga e-thiamine ebuchosheni. Yaziwa ukuthi ithuthukise inkumbulo futhi inqobe ubuthakathaka nokukhathala ngenkathi inciphisa ukuvinjwa kokuziphatha kwengqondo, i-sulbutiamine nayo isetshenziswa ngabasubathi. I-Sulbutiamine ihlukaniswa njengesidakamizwa esihlakaniphile se-cholinergic ngoba le nto isebenza njengomlawuli we-cholinergic ngaphakathi kwe-hippocampus. Lapho isetshenziswa kwimithamo yokwelapha, akukho miphumela emibi eye yabonwa.
I-Serotonin, noma i-5-hydroxytryptamine (5-HT), iyi-monoamine neurotransmitter ebamba iqhaza futhi ilawule imizwa (inhlala-kahle, injabulo), futhi ilinganise ukulala, isifiso sokudla, ukuqonda, ukufunda, inkumbulo, uhlelo lomvuzo nezinqubo eziningi zomzimba ezifana ukuhlanza kanye ne-vasoconstriction. ISerotonin ikhiqizwa ngaphakathi komzimba ngokuchayeka elangeni. Amakhemikhali we-serotonergic wemvelo (i-serotonin-ekhuthaza noma ekhulula), efana ne-L-tryptophan, nawo akhona emithonjeni yokudla.
Ama-dopaminergics yizidakamizwa ezihlakaniphile ezithinta amazinga e-dopamine ngaphakathi kobuchopho. IDopamine yi-hormone ne-neurotransmitter edlala izindima eziningana ezibalulekile ebuchosheni nasemzimbeni. Isibonelo, indlela ye-dopamine inesibopho semizwa emihle nokusayinwa kwe-biochemical kwempendulo enhle maqondana nokuhlangenwe nakho okumnandi njengokudla okumnandi, ubulili, ukuzibandakanya okuhle komphakathi, njll.
I-Dopamine iyatholakala njengomuthi ngaphansi kwamagama brand we-Intropin, Dopastat, neRevimine, phakathi kokunye, okusetshenziswa kakhulu njengomuthi ovuselelayo ekwelapheni umfutho wegazi ophansi, ukushaya kwenhliziyo okuhamba kancane, nokuboshwa kwenhliziyo.
Izidakamizwa ezihlakaniphile ze-Dopaminergic ziyi-dopamine boosters ezisetshenziselwa ukunqoba amazinga aphansi we-dopamine, ngokuvamile ahambisana namazinga aphansi wamandla, ukuntuleka kwesisusa, i-anhedonia (ukungakwazi ukuzizwa ubumnandi), ukunganaki, ukucindezelwa, imikhuba yokulutha, inkumbulo emibi nokusebenza okuncishisiwe kokufunda. Izidakamizwa ezijwayelekile ze-dopaminergic smart yi-L-tyrosine, i-Yohimbine ne-selegilin (i-MAO inhibitor). Ama-dopamine boosters akhuthaza ukunakwa nokuqaphela ngokwandisa ukusebenza kwe-dopamine ngaphakathi kwengqondo, noma ngokuvimbela ama-enzyme aphule i-dopamine phansi.
Eminye imikhakha yezidakamizwa ezi-smart, izithuthukisi zomqondo, kanye ne-nootropics ifaka ama-glycinergics, adenosinergics, adrenergics, cannabinoidergics, GABAergics, histaminergics, melatonergics, monoaminergics, ne-opioidergics.
Iqembu le- “-ergic” nootropics yizinto ezishintsha uhlelo oluthile emzimbeni nasengqondweni. Uhlelo oluqondile luhlanganiswe engxenyeni yokuqala yegama. Isibonelo, ama-glycinergics alingisa ngqo uhlelo lwe-glycine emzimbeni nasengqondweni, ama-adenosinergics aguqula ngqo uhlelo lwe-adenosine emzimbeni nasengqondweni, ama-dopaminergics enza ohlelweni lwe-dopamine nokunye.
Ingxenye yokufaka iyinkimbinkimbi lapho into eyodwa yamakhemikhali – okubizwa kanjalo “bamba” – inendawo lapho elinye khona i-mocule – okubizwa kanjalo “isivakashi” – ifakiwe.
Ama-cyclodextrins yizihlanganisela ezisetshenziswa kakhulu zokubamba, ngoba zingakha inhlanganisela yokuhlanganiswa nezinhlobonhlobo eziningi zezinto eziqinile, ezingamanzi neze-gaseous. Izakhi zomzimba zezihambeli zisukela kuma-reagents we-polar anjenge-asidi, amayini, ama-ion amancane (isib. ClO4-, SCN-, halogen anions) kuya kuma-apolar aliphatic nama-hydrocarbons amnandi namagesi angavamile. Izakhiwo zokufakelwa zingahlanganiswa ngesisombululo noma esimweni sekristali. Ukuhlanganiswa kwe-Ultrasonic ye-cyclodextrin-based inclusion complexes kuyindlela ethembekile futhi ephumelelayo yokukhiqiza ukufakwa okuhlanganisiwe, okunikeza ukuqina okuphezulu nokwanda kwe-bioavailability. Amanzi asetshenziswa kakhulu njenge-solvent, yize i-dimethyl sulfoxide ne-dimethyl formamide ezinye izindlela zokuxazulula ezisetshenziswa.
Ngaphandle kokufakwa kwamakhemikhali e-pharmaceutical / nutraceutical, i-cyclodextrin nayo isetshenziswa njengamakhemikhali ezakhamuzi zama-molecule aphunga ukuze athole ukuzinza okuphakeme nokukhipha kancane kancane.
Funda kabanzi mayelana nokukhiqizwa kokufakwa okufakwa ngaphakathi kwe-ultrasonically!